Ao Azerbaijan Tany Manankarena Solika, Manao Hetsi-panoherana Ny Vahoaka; Valian’ny Governemanta Fisamborana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2016 12:25 GMT
Hetsi-panoherana ao Guba, Azerbaijàna. Sary avy tamin'ny Sampan'ny RFE/RL amin'ny fiteny Azeri
Nifamory teo afovoan'ny tanàna ary nanoloana ireo tranoben'ny governemanta ireo olona an-jatony manerana an'i Azerbaijan, nangataka asa ary nanohitra ny fiakaran'ny vidin-javatra, ny fitotonganan'ny fiainana ary ny fitomboan'ny tahan'ny tsy an'asa. Noho ny fitotongan'ny vidin-tsolika maneran-tany izay tafidina hatramin'ny latsaky ny 30 dolara Amerikana ny iray barika ankehitriny, miatrika fotoan-tsarotra izao ilay firenena, izay nisitraka ambaratonganà fahamarinan-toeran'ny toekarena teo ho eo ihany, noho ny toekareny miankin-doha amin'ny solika.
Korontana tonga tao anatin'ny fitotonganan'ny sandam-bola eo an-toerana, Manat, izay nidin-danja voalohany ny Febroary 2015, ary mbola niverina nidina efa ho ny ampahatelony mihitsy indray ny Desambra 2015, raha toa ka nikisaka naka ny taham-pifanakalozana mihevaheva ilay firenena. Fanampin'ny fidinana be an'ny vidin-tsolika sy ny fandaniana mihoapampana nataon'ny firenena tamin'ireo tetikasa toy ny Lalao Eorôpeana, mazava be fa tsy ho afaka ny hipetrapetraka sy hiankin-doha be amin'ny vola miditra avy amin'ny solika fotsiny intsony i Azerbaijàna.
Tezitra sy mitaintaina ireo mponina amin'ireo distrika maro, tafiditra amin'izany Fizuli, Agsu, Aghcabedi, Siyazan, Quba, Sumgayit ary Lankaran, ary nidina an-dalambe sy niantso ny hijerena haingana ny faharatsian'ny toe-piainan'izy ireo.
Lehilahy iray 38 taona, olona nafindra toerana tao anatin'ny firenana ihany, no nihanika ny rihana farany ambony indrindra taminà tranobe iray misy rihana dimy, vonona ny hamono tena, milaza fa tsy afaka intsony na dia ny hanome mofo ho an'ny ankohonany aza. Nozarain'ireo mpisera amin'ny Aterineto tao amin'ny Twitter ireo tantaran'ireo fihetsiketsehana :
Mipoaka ny #Fihetsiketsehana ao #Azerbaijan mikasika ireo asa, tsy fahombiazana #ara-toekarena. Mifandona amin'ny #polisy ireo mpanao fihetsiketsehana ao #Siyazan; 55 no nosamborina.
Ankehitriny, faritra efatra ao #Azerbaijan no manao fihetsiketsehana manohitra ny fiakaran'ny vidin'entana ary ny fahataràn'ny karama. #Agsu #Agcabedi #Siyazan #Fizuli
Mamaly amin'ny entona sy fitaovam-piadiana ny governemanta
Toa hita ho gaga tamin'ny fihetsiky ny governemanta ireo mpanao fihetsiketsehana — nampiasa entona mandatsa-dranomaso sy bala fingotra ny polisy mpandrava korontana ary ireo andiany eo an-toerana, mba hanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana ary nisambotra am-polony tamin'ireo — tafiditra tamin'izany ireo filoha mpitarika ny mpanohitra, izay noahiahiana ho nikarakara ireo fihetsiketsehana ny sasany tamin-dry zareo. Tao amin'ny distrikan'i Siyazan fotsiny, nisambotra olona maherin'ny 50 ny polisy noho ny “fidinana an-dalambe tsy ara-dalàna”.
Azadliq Radiosu [sampan'ny Radio Liberty amin'ny fiteny Azeri ], nitatitra fa voatazona any Lankaran ny lehiben'ny antoko Popular Front Nazim Hasanli, sy ny filohan'ny sampan'ny antoko Musavat eo an-toerana, Iman Aliyev. Ho fanampin'ireo lehiben'ny mpanohitra ireo, voatazona ihany koa ireo mpikambana malaza sasany avy amin'ireo antoko mpanohitra hafa. Na teo aza ny porofon'ny tsy mahameloka azy, nohelohina noho ny sazy hafa isan-karazany ireo voatazona, maherin'ny iray volana am-ponja, noho ny fandraisany anjara taminà hetsi-panoherana tsy manara-dalàna.
Nosamborina tany Baku ihany koa ilay mpitoraka bilaoginà lahatsary, Huseyn Azizoglu, fantatra tamin'ireo lahatsariny fohy, mitsikera, izay nozarainy tamin'ny pejy Facebook Three Faces [Uc Uz] ary nosaziana 15 andro an-tranomaizina. Roa andro taorian'ny fisamborana an'i Azizoglu, araka ity bitsika ity, nofafàna tao amin'ny fantsony YouTube daholo ireo lahatsary rehetra maneho ny fomba niatrehan'ny polisy Azerbaijani an'ireo mpanao fihetsiketsehana:
Nofafàna tao amin'ny pejy Uc Uz ireo lahatsarin'i Huseyn Azizoglu mikasika ireo polisy. Mazava ny zavatra rehetra [mihomehy]
Taminà tafatafa niaraka tamin'i Azadliq Radiosu, nilaza i Agil Abbas, Mpikambana ao amin'ny Parliemanta avy ao Agchabedi fa tsy misy tokony atahorana, ary marina fa anaovana ankasomparana ny olona ankehitriny:
Ankehitriny, milamina ny zavatra rehetra any. Nilaza ny teniny ireo vahoaka, naheno azy ireo tomponandraiki-panjakana ary samy niresaka ireo fepetra tokony horaisina taorian'iny izy rehetra [milaza ilay fivoriana izay natao teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ireo tomponandraikitry ny tanàna]. Izao izao, nesorina ireo haba amin'ny lafarina. Afaka lazaiko mazava aminareo, misy faminganana kely ihany koa aty. Amin'ny fotony, misy ireo milalao ny fihetsehampon'ireo vahoaka. Na ireo mponina aza nilaza io taminay. Misy kirizy manerana ny tany tontolo amin'izao. Ary aty Azerbaijan ihany koa. Fa tsy tokony handeha hitabataba be amin'io isika.
Ny ankilany mitady sakafo; ny andaniny mitady ireo mpanatanteraka
Raha nikaroka ireo tena heveriny ho mpamadika avy amin'ireo antoko mpanohitra sy ireo vondrona fivavahana ireo manampahefana, mbola nanizingizina tamin'ny media ireo mpanao fihetsiketsehana fa nikarakara diabe tsy nisy famporisihan'ny olon-kafa fa tamin'ny sitrapony samirery izy ireo:
Tsy misy zavatra azo tsoahana amin'io. Tsy misy ny mofo. Manohitra ireo fiakaran'ny vidin-javatra ny olona, tsy fisian'ny asa, fiakaran'ny vidin'ny sakafo. Ary ankehitriny, nitondra tafika eto an-toerana sy fitaovana izy ireo, miroso amin'ny fisamborana. Toy izany ny zavatra miseho ankehitriny. Manao hetsi-panoherana ny hamafisan'ny fiainana ny vahoaka kanefa tonga dia miatrika fisamborana.
Noho ny tahotra ny fahatezerana bebe kokoa sy fikorontanana any amin'ireo faritra hafa, nandefa tafika anatiny ny governemanta mba hisavasava ireo faritra any Guba sy Sheki — saingy hetsika tsy nahasakana ireo mponin'i Guba tsy hanandratra ny feony koa izany.
Mino ilay manam-pahaizana ara-politika ao an-toerana, Arastun Orujlu, fa tsy hitondra zavatra hafa ankoatra ny herisetra misimisy kokoa ny famaliana ny fitakiam-bahoaka amin'ny herisetra. Niteny izao tao amin'ny Radio Liberty i Orujlu:
Raha toa ka tokony hijery ny marimaritra iraisana miaraka amin'ireo mpanao hetsi-panoherana, mandefa polisy mitam-piadiana sy tafika anatiny indray ireo manampahefana. Izany no zavatra ratsy indrindra ataon'izy ireo. Mampiseho ihany koa izao fa na amin'ny toe-javatra manahirana sy mahamay toy izao aza, tsy vonona ny hiroso hifampiraharaha amin'ny vahoaka mihitsy ireo manampahefana. Ny olana, mitondra amin'ny herisetra bebe kokoa ny fampiasàna herisetra. Heveriko fa tena zava-doza izao ary mety hisy vokany tsy afaka hialàna intsony fa hiodinkodina eo foana ary tsy ho voafehy intsony avy eo.
Nikatona tsirairay daholo ireo fivarotana, toerana fisakafoana, toerana fisotroana kafe, fisotroana zavapisotro mahamamo, fivarotana fiara, ary na ireo fivarotana madinika aza, tao anatin'ilay kirizy, izay lasa mahatonga azy ireo tsy ho afaka manohy ny asa fandraharahàny.